Horudhac: Manchester City vs Chelsea… (Miyey City caawa u dabaal dagi doontaa hanashada Premier League?) – Gool FM
(Manchester) 08 Maajo 2021. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa caawa u dabaal dagi karta horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan haddii ay caawa garaacdo naadiga Chelsea.
Labadan koox ayaa caawa ku balansan garoonka Etihad ee magaalada Manchester ciyaar qayb ka ah horyaalka Ingiriiska, iyadoo ay xusid mudan tahay in labada naadi ay sidoo kale wada ciyaari doonaan fiinaalka Champions League dhammaadka bishan.
Kooxda uu hoggaamiyo Macallin Pep Guardiola ayaa ciyaarta 34 kulan oo horyaalka ah iyadoo uruursatay 80 dhibcood waxayna 13 dhibcood ka sarreysaa naadiga Manchester United oo leh 67 dhibcood inkastoo ay heysato ciyaar baaqi ah, sidaas darteed, City ayaa noqon doonta ku guuleystayaasha horyaalka haddii ay helaan saddex dhibcood caawa.
Saacadda ay ciyaarta billaabaneyso: 19:30 Fiidnimo xilliga geeska Afrika.
John Stones oo qaadanaya kulankii saddexaad oo ganaax ah ayaa caawa seegaya ciyaartan, halka sidoo kalena Eric Garcia la filayo inuusan ciyaarin caawa maadaama xanuun qandho lagu sheegay uu la tacaalayo, balse Man City ayaa heysata saf kale oo taam ah ciyaartan.
Chelsea ayaanan wali dib u helin Mateo Kovacic oo dhaawac bowdada ah qaba, balse waxaa kulammada Premier League kusoo laabanaya Antonio Rudiger oo ciyaartii Fulham ku seegay dhaawac wajiga kasoo gaaray inkastoo kulankii Champions League ee Real Madrid uu ku ciyaaray maaskarada wajiga difaaca u ah.
Manchester City ayaa 26 guuldarro kala kulantay Chelsea ciyaaraha Premier League, waana kooxda ay kala kulantay guuldarrooyinka ugu badan tan iyo markii magaca Premier League la bixiyay.
Hase yeeshee, Chelsea ayaa lasoo garaacay sagaal ka mid ah 12-kii booqasho ee ugu dambeysay oo ay Etihad kusoo ciyaarto horyaalka, waxaana ku jira saddexdii booqasho ee ugu dambeysay oo si xiriir ah loo soo garaacay.
Chelsea ma aysan guuldarreysan afar booqasho oo xiriir ah horyaalka Ingiriiska oo ay hal naadi booqatay tan iyo intii u dhexeysay 2009 illaa 2013 oo ay Man City kala kulantay afar guuldarro oo xiriir ah oo kusoo gaaray garoonka kooxda Sky Blue.
Waxaanan barbarro ku dhammaanin mid kasta oo ka mid ah 11-kii ciyaarood ee lasoo dhaafay ee ay labadan naadi ciyaareen Premier League, Manchester City ayaa adkaatay toddobo jeer, halka Chelsea ay guuleysatay afar jeer.
Manchester City ayaa guul gaartay 20 ka mid ah 22-kii ciyaarood ee ugu dambeysay horyaalka, waxayna sidaas ku shaqeysatay 60 dhibcood, taasoo la micnaha dhibacaha ay Man City shaqeysatay muddadaas inay hal dhibic oo qura ka yaryihiin dhibcaha ay Chelsea shaqeysatay horyaalka guud ahaan xilli ciyaareedkan oo ah 61 dhibcood.
Man City ayaa guuldarreysatay labo ka mid ah saddexdii ciyaarood ee ugu dambeysay horyaalka oo ay garoonkeeda ku ciyaartay, waxayna wajihi kartaa labo guuldarro oo si xiriir ah garoonkeeda kaga soo gaarta horyaalka tan iyo February 2016.
Wali ma aysan dhicin in koox uu hoggaaminayo Macallin Pep Guardiola lagu garaaco garoonkeeda laba ciyaarood oo xiriir ah xirfaddiisa horyaallada waaweyn isagoo caawa soo istaagi doona diilinta macallimiinta kulankiisa 221-aad ee horyaal heer sare ah.
Sergio Aguero ayaa hal gool u jira inuu jebiyo rikoorka ciyaaryahanka goolasha ugu badan Premier League hal koox u dhaliyay, waxaana rikoorkan heysta Wayne Rooney oo Manchester United u dhaliyay 183 gool.
Thomas Tuchel oo Chelsea hoggaamiya waxa uu noqday macallinkii ugu horreeyay shabaqiisa gool ka ilaashaday 11 ka mid ah 15-kiisa kulan ee ugu horreeya Premier League.
The Blues ayaa guuldarro la’aan ah dhammaan 11-kii ciyaarood ee ay bannaanka garoonkeeda kusoo ciyaartay tartammada oo idil inta uu xukunka u hayo Tuchel, waxaana laga dhaliyay afar gool oo qura.
Kooxda ka dhisan Galbeedka London ayaa dooneysa inay guuldarro la’aan ahaato 12 kulan oo xiriir ah oo ay bannaanka kusoo ciyaartay tan iyo intii u dhexeysay April illaa November 2014 xilligaas oo uu Jose Mourinho guuldarro ka badbaaday 15 kulan oo isku xigta oo uu bannaanka kusoo ciyaaray.
Balse Chelsea ayaa dhinaca kale guul la’aan ah dhammaan afartii ciyaarood ee ay Premier League la ciyaartay kooxaha ka sarreeya xilli ciyaareedkan, waxayna heshay kaliya labo dhibcood iyadoona dhalisay hal gool oo qura.
Horudhac: Barcelona vs Atletico Madrid... (Kulan go'aamin kara horyaalka La Liga oo maanta ka dhici doona Camp Nou)
Horudhac: Liverpool vs Southampton... (Saints oo doonaysa inay minin iyo marti u garaacdo Reds horyaalka markeedii saddexaad Taariikhda)